Health Sarokar | यो हो बच्चालाई सजिलै औषधि खुवाउने तरिका
यो हो बच्चालाई सजिलै औषधि खुवाउने तरिका
के बच्चाले औषधि नखाएर हैरान हुनुहुन्छ ? यदि त्यसो हो भने अब चिन्ता नगर्नुहोस् किनकि यहाँ त्यो समस्यालाई कसरी हल गर्ने भन्नेबारे सजिलो उपाय बताइएको छ ।
बच्चालाई ट्याब्लेट/क्याप्सुल औषधि खुवाउन भन्दा झोल औषधि खुवाउन सजिलो हुन्छ। त्यसो त झोल औषधिको स्वाद पनि बच्चालाई मन पर्ने गरी बनाइएको हुन्छ। अनि फेरी बच्चाको तौल र आवश्यकता अनुसार परिमाण अलिकति कम वा बढी गर्न सजिलो हुने कारणले गर्दा पनि बालबालिकालाई झोल औषधि नै प्रयोग गरिन्छ। झोल औषधि खुवाउनु अघि हरेक चोटि औषधिको बोतल राम्रोसँग हल्लाउनु भने पर्दछ। तर झोल औषधिको एक समस्या छ, यसको सही परिमाण नाप्न सजिलो भने हुँदैन।
ड्रपर र प्लास्टिकको बिर्कोको प्रयोग
एकदम साना बच्चाको लागि मापन गर्न सजिलो होस् भनेर ड्रपर दिइएको हुन्छ र त्यसको प्रयोगले औषधि कति थोपा खुवाउने भनेर मापन गर्न सजिलो हुन्छ तर अलि ठुला बच्चाको औषधिमा भने बिर्को माथि मापनको लागि मात्रा लेखिएको प्लास्टिकको बिर्को हुन्छ। उक्त प्लास्टिकको बिर्कोमा औषधि मापनको लागि रेखा बनाइएको हुन्छ, र आफूलाई चाहिने औषधि त्यो रेखा अनुसार नापेर बच्चालाई खुवाइन्छ।
सो प्लास्टिकको बिर्को औषधि मापनको लागि चिया चम्चा भन्दा धेरै नै राम्रो मानिन्छ। तपाईँ आफै याद गर्नुहोस् त चिया चम्चा घरमा कति थरीका छन्, के ती सबै चम्चामा नाप्दा बराबर हुन्छ त? तर उक्त प्लास्टिकको बिर्कोमा पनि थोरै मात्रा औषधि नाप्नु पर्‍यो भने सारै गाह्रो हुन्छ। त्यसैले पनि आजकल धेरै जसो देशहरूमा "ओरल सिरिन्ज" यानि मुखबाट खुवाउनको लागि प्रयोग गर्ने सिरिन्जको प्रयोग बढ्दो छ।
के हो ओरल सिरिन्ज ?
'सिरिन्ज' शब्द सुन्दैमा मानिसहरू दुखाइको अनुभूति गर्छन् ।त्यसमाथि 'ओरल सिरिन्ज' भन्दा त झन् गाह्रो नै सुनिन्छ। तर, वास्तवमा यो औषधि खुवाउनको लागि प्रयोग गरिने एक प्रकारको सिरिन्ज हो । बच्चाहरूलाई औषधि खुवाउन सबैभन्दा सजिलो भनेको झोल औषधि हुन्छ, चाहे त्यो ड्रप होस वा सिरप वा सस्पेन्सन। त्यसैले यस्ता औषधि खुवाउन ओरल सिरिन्जको प्रयोग बढ्दो छ ।
यो औषधिको मात्रा सही मापन गर्न सजिलो बनाउने एक माध्यम हो, चाहे मात्रा ०.३ एमएल होस वा ४.५ एमएल सजिलोसँग तोकिएको औषधिको मात्रा निकालेर खुवाउन सकिन्छ। त्यस कारण पनि अन्य मुलुकमा यो विधिलाई धेरैले स्वीकारेका छन् ।
मात्रा मापन गर्न पनि सजिलो
यसले औषधिको मात्रा सही मापन गर्न सजिलो बनाउँछ। तर औषधि निकाल्दा हावा चाहिँ सिरिन्जमा आउन दिनु हुँदैन, त्यसो भएमा औषधिको मात्रा नमिल्न पनि सक्छ। उक्त सिरिन्जलाई बिस्तारै थिचेर थोरै थोरै गरेर बच्चाको मुखमा गाला तर्फ औषधि हालिदिँदा बच्चाले औषधि अलि अलि गरी खान्छ। सोझै मुखको बिच भागमा औषधि हालिदिने चाहिँ गर्नुहुँदैन त्यसो गरेमा बच्चालाई औषधि सर्किन सक्दछ।
यसरी औषधि खुवाउँदा तपाईँले औषधि पोखिएला, र औषधिको मात्रा नपुग्ला भन्ने डर नमानीकन निर्धक्क भएर औषधि खुवाउन सक्नु हुन्छ। तपाईँले खुवाउनु भएको औषधि बच्चाले खाई सकेपछि मात्र उसलाई सुताउनु पर्दछ।
कुनै खतरा त छैन?
तपाईँले बच्चालाई कुनै पनि झोल खुवाउँदा सर्किने डर हुन्छ, त्यसैले मुखमा गाला तर्फ जाने गरी अलिअलि गरेर खुवाउन पर्ने औषधि एकै चोटि धेरै मुखमा पर्न गयो भने सर्कने डर भने हुन्छ। हो, ओरल सिरिन्ज प्रयोग गर्दा कहिले काहीँ अस्पतालमा खुवाउनु पर्ने औषधि सुईको प्रयोग गरेर सो औषधि लगाइएको पनि भेटिएको छ तर तपाईँले सिरिन्ज किन्दा नै सुई र बिर्को फार्मेसीमा छोड्नु भयो भने तपाईँलाई अरू डर पनि हुँदैन र घरमा त सामान्यतया सुई लगाउन सक्ने मानिस पनि हुँदैन र बानी पनि हुँदैन, तसर्थ खतरा खासै हुँदैन।
कुन बेला प्रयोग नगर्ने ?
यदि तपाईँको आँखाले सिरिन्जका रेखाहरूलाई राम्रो सँग ठम्याउन सक्दैन भने तपाईँले यस्तो ओरल सिरिन्जको प्रयोग नगर्दा राम्रो हुन्छ।
नेपालमा प्रयोग हुन्छ ?
नेपालमा पनि केही डाक्टरहरू सुई निकालिएको सिरिन्जको प्रयोग गरेर मुखबाट औषधि खुवाउन सल्लाह दिनु हुन्छ। कहिले काहीँ अस्पतालमा बच्चालाई मात्रा मिलाएर खुवाउन गाह्रो हुँदा पनि यसको प्रयोग गरिन्छ। तर ओरल सिरिन्ज नै नेपालको बजारमा आई नसकेको हुनाले पनि सिरिन्जको प्रयोग गरेर औषधि खुवाउने चलन नदेखिएको हो। नयाँ नयाँ समान अनि प्रविधि भित्राउँदै गरेको हाम्रो देशका व्यापारीहरूले अब यो सानो कुरा तिर पनि ध्यान दिए सर्वसाधारणलाई सजिलो हुने थियो कि?
यसबाहेक अर्को पनि विधि छ त्यो हो : दूध वा पानी मिसाउने
तपाईंहरुमध्ये कतिपयले औषधिलाई दूध वा पानीमा मिसाएर खुवाउनु हुन्छ होला । यदि तपाईँ त्यसो गर्नुहुन्छ भने थोरै दूध वा पानीमा मिसाएर औषधि दिँदा ठिकै हुन्छ। तर, धेरै यस्ता कुराहरू मिसाउनु हुन्छ भने बच्चाले सबै दूध वा पानी नखाइदिन सक्छ। र, चाहिएको जति औषधि बच्चाले सेवन नगर्न सक्ने सम्भावना बढी हुन्छ।
पानी भन्दा दूधको प्रयोगले औषधिको स्वाद बच्चालाई थाहा नदिन मद्दत गर्दछ। जसले गर्दा बच्चाले अलि सजिलोसँग औषधि खान सक्छ। तर, के कुरा विचार गर्न जरुरी छ भने सबै औषधि दूधमा मिसाएर वा दूधसँग दिन भने मिल्दैन।तर पानी मिसाउन चाहिँ हुन्छ । याद गर्नुहोस् बच्चालाई औषधि खुवाएपछि अलिकति पानी पनि खुवाउनु राम्रो हो । खोकीको औषधि बाहेक सबैजसो औषधि खुवाएपछि पानी खुवाउनु पर्दछ।
सञ्जय मणि दीक्षित
उप प्राध्यापक (फार्माकोलोजी)